Welllọ ọrụ Maxwell rụpụtara ọgwụ ọgwụ ọgwụ | Maxwell
Ọgwụ bụ ihe ma ọ bụ nkwadebe nke igbochi, ọgwụgwọ ma ọ bụ nchọpụta ọrịa nke ụmụ mmadụ na anụ ụlọ. Na ndabere, isi ogwu nwere ike ekewa umu ogwu na eke ihe nkpuchi. Ọgwụ nwekwara ike igbochi ọrịa, gwọọ ọrịa, belata ihe mgbu, melite ahụike, kwalite ikike bodys ịlụ ọgụ ọrịa ma ọ bụ nyere aka ịchọpụta ọrịa.
Industrylọ ọrụ Maxwell na-elebara anya na nyocha na mmepe nke nchekwa na ahụike nke etiti ọgwụ, na-enye akụrụngwa nwere nkà na ọrụ nkwekọrịta maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ, ngwaahịa na-agbaso ihe GMP chọrọ. Aridị dịgasị iche iche gụnyere ọgwụ ọgwụ dị iche iche dịka ọgwụ ụtọ
Welllọ ọrụ Maxwell nwere ogologo akụkọ ihe mere eme iji mepụta akụrụngwa ọgwụ yana enyefela akụrụngwa ahụ yana ọrụ nkwekọrịta maka ọtụtụ akụrụngwa a ma ama na ụlọ ọrụ ndị a ma ama na-ere ahịa. Anyị abụghị nanị igwe eji emepụta ihe, kama anyị na-enyekwa ọrụ nke nrụpụta ụlọ ọrụ niile, njikwa injinia, ndozigharị na nrụpụta ụlọ ọrụ, na-ahụ maka njikwa ọrụ, ihe eji arụ ọrụ wdg.
Isi akụrụngwa na ọrụ mmeghe:
Lecha: A na-ejikarị agwakọta ntụ ntụ na ntụ ntụ, ntụ mmiri gwakọtara ya na obere mmiri mmiri. Maka ịsụcha mmiri mmiri, ụlọ ọrụ Maxwell emepụtala ọfụma iji mee ka agwakọta agwakọta na ịdị n'otu; Ihe igwekota nwere nkọwa zuru oke sitere na ụdị ụlọ nyocha ruo ụdị mmepụta, ụdị vetikal ma ọ bụ ụdị kwụ ọtọ maka nhọrọ gị. Can nwere ike ịhọrọ igwe kachasị adabara dịka usoro mmepụta na akụrụngwa akụrụngwa (njupụta, ntupu, wdg).
Ngwunye na Ngwakọta nri: nwere obere akpa na ngwa akpa akpa na - enweghị ike ịkewa ya na ụdị akpaaka na akpaka.
Ihe na-ebu: nwere pneumatic na-ebugharị (nrụgide dị mma na nrụgide na-adịghị mma, usoro dị omimi, na-agbaze mmiri) na ebu ihe na-arụ ọrụ (ịghasa, bọketị, eriri olu na eriri). ;
Ngwa ngwugwu: gụnyere akpa valvụ na igwe mbadamba akpa na-emeghe. Dabere na njuputa, a na-ekewa ya ruo 5kg, ruo 50 n'arọ na akpa akpa. ;
Emulsifier dị elu:chụgara, ụdị, emulsification, ndozi nke ihe mgbakwunye nri, dịka ụdị, enwere ike ekewa ụdị abụọ: ụdị batch na ụdị inline; dị ka usoro amịpụta, enwere ike ekewa n'ime emulsifier na-asọpụta ngwa ngwa, ụdị emulsifier elu, shia emulsifier dị elu, mmiri na-agwakọta emulsifier siri ike, wdg; Ihe dị iche iche dị ka uzu ikuku na igwe ọkụ dị na ha iji gboo ihe dị iche iche nke usoro.
Sistem ntụ ntụ na Liquid Sistem: Ikwuputa ntụ ntụ nke pneumatic (nrụgide dị mma, nrụgide na-adịghị mma, okirikiri, usoro nha), igwe na-ebu (ntụgharị, eriri, bọket, wdg); mmiri nrụgide dị mma na nrụgide na-adịghị mma na-eziga, mgbapụta.
Ntụ ntụ, Sistem Liquid: gụnyere “usoro mmụba”, “usoro mbelata”, “usoro olu” na usoro ndị ọzọ.